Intengiso njengoMama weBlogger | Martech Zone
Intengiso njengoMama weBlogger
NgoLwesithathu, Agasti 12, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UChris Lucas
baye kudala ndaba kwiindaba zakutshanje ngenxa yokuthanda kwabo izinto zasimahla kunye neeperks eziza nokulandelwa kakuhle kwabasetyhini-be-pitch.
Yintoni ebangela ukuba iibhlog zamama zilandelwe liqela elivela kwi-PR pros kunye nabathengisi kukuba banokuhlanganisa amaqela amakhulu abantu basetyhini (ubukhulu becala), abathembela oko bakuthethayo, bazakhele njengabacebisi abathembekileyo, kwaye bayazi ukuba uluntu lwabo lufuna ntoni. Ke, yintoni abathengisi abayifundayo kubabhlogi boomama?
Umnqweno onawo kwiibhlog zebhlogi awunakufakwa kwaye uthando onalo kwishishini lakho akufuneki ukuba lwenziwe. Ezona blogs ziphumeleleyo zezakhelweyo ngenxa yothando lwento umbhali anayo, usapho lwabo, umsebenzi wabo kunye nosapho, njl. Njengentengiso kufuneka uchaze ukuba yeyiphi na inkampani oyithandayo. Imiqondiso engama-37 yakhe eyalandelayo enkulu malunga nokuthanda kwabo isoftware elula, esebenzayo.
I-Monitor Monitor wakhe isixhobo esikhulu sentengiso nge-imeyile ejikeleze uthando lwee-imeyile eziyilwe kakuhle. Nokuba yeyiphi na inkanuko yakho, yenza ukuba ungene kwintengiso yakho kwaye ukhumbule, abathengi bakho banokuxela ukuthanda kwenyani kwinto eyenziweyo!
Ukuqhagamshela nabafundi babo zezona zinto zibalaseleyo zebhlog. Bayazi ukuba ngawaphi amaqhosha okutyhala kunye nendlela yokuqhuba abafundi babo ukuba bathathe amanyathelo kuba banobudlelwane obuqhelekileyo. Ngokuqinisekileyo, ayingabo bonke abathengisi abanokuba nolwalamano olukhethekileyo njengobumama kunye nabathengi babo, kodwa banokufumana ikhonkco elifanayo.
Njengomthengisi kufuneka uqonde ukuba abathengi bakho bafuna ntoni kwaye unxibelelana njani nabo. Nokuba kungoku uphando olulula kwi-Intanethi, okanye ngezinye izixhobo ezikwi-Intanethi ezinje ngeMidiya yokuSebenza, ukufumana indlela yokunxibelelana nabathengi bakho kubalulekile kwihlabathi lanamhlanje lentengiso yomntu nomnye.
Uninzi lweebhlog zomama zihlanganisene nesizathu. Nokuba sisifo okanye IiKuki zeNtombazana eziNtombazana. Njengeshishini uthando lwakho lunokubonwa ngento oyikholelwayo. Nokuba unombandela wokuqonda ngokwasentlalweni okanye unobangela wezinto ezilula, ezisebenza ngokukuko, unokuhlanganisa abathengi bakho kunye nabathengi abanokubakho kwaye ubenze babe ngabameli bakho bohlobo olwakhiwe malunga nenkolelo ekwabelwana ngayo.
Kwimeko apho, i-Salesforce yakhawuleza yaziwa njenge-NO Software CRM kwaye ngoku iqhayisa iinkampani ezingama-59,000 njengabasebenzisi besisombululo sabo. Baphume bajinga ngokuchasene nezisombululo zeCRM ezibotshiweyo kwiinkonzo zeenkampani nakwiCRM yedemokhrasi ngokukuvumela ukuba ufikelele kwindawo yogcino lwedatha naphina emhlabeni.
Ethos wakha uphawu lwamanzi ajikeleze unobangela-amanzi acocekileyo abantwana- kwaye wayinceda ukuba ifezekise ukuhanjiswa Starbucks. Xa uthenga i-Ethos uyithengela inkolelo yokuba abantwana kufuneka babe namanzi acocekileyo. Ibhrend yakho kufuneka imele into eza kuma ngaphandle kwayo, kodwa khumbula ukuba umela yonke into ngekhe umelane nayo nantoni na… ke khetha ngobulumko.
Ngaba ukubetha kubonakalisile? I-Twitter-Isixhobo esitsha soLawulo lwe-AP